Hurumende Inoburitsa Magwaro Matsva Munyaya Iri kuPomerwa VaElton Mangoma
Dare repamusoro reHigh Court rabvumidza gweta rehurumende kuti ribvunzurudze munyori mubazi rezvemhando dzemoto, VaJustin Mupamhanga pamusoro pehufakazi hwavakapa mudare panyaya iri kupomerwa gurukota rezvemahando dzemoto VaEIton Mangoma.
VaMangoma vari kupomerwa mhosva yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pakutengwa kunonzi kwakaitwa mafuta nehurumende kune imwe kambani yekuSouth Africa munaNdira.
Mutongi wedare repamusoro, VaChinembiri Bhunu, vatura mutongo wekuti gweta rehurumende VaChris Mutangadura vabvumidzwe kubvunzurudza VaMupamhanga pamusoro pehufakazi hwavakapa mudare pakutongwa kuri kuitwa nyaya yaVaMangoma iyi.
VaBhunu vati zvakakosha kuti VaMupamhanga vanyatsotsanangurira dare pamusoro pehumbowo hwavakapa mudare.
Zvichitevera mutongo uyu, VaMupamhanga vaburitsa rimwe gwaro rine makambani ekunze makumi maviri nemashanu anotengesera Zimbabwe mafuta.
VaMupamhanga vati makambani aya akapihwa mvumo neboka reState Procurement Board, yekuti atengeserane nehurumende uye vati imwe kambani inoda kutengeserana nehurumende inotofanira kutanga yapihwa mvumo neboard iri.
Kunyange hazvo gwaro remakambani aya risina kugazetwa, VaMupamhanga vati makambani aya, ayo anosanganisira BP, Engen, pamwe neIndependent Petroleum Group, ndiwo akapihwa mvumo neState Procurement Board yekuti atengesere Zimbabwe mafuta.
Kambani yekuSouth Africa yeNooa Petroleum, iyo yakatengesera Zimbabwe mafuta, haipo pagwaro raburitswa naVaMupamhanga iri. Hurumende inoti VaMangoma vakakonzeresa kuti hurumende itenge mafuta kubva kukambani iyi pasina kuendwa kutender sezvinodiwa nemutemo.
Asi VaMupamhanga pachavo vakaudza dare kuti mafuta aya, ayo aikosha mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica, akatengwa kukambani yeMowhelere Trading, kwete zviri kutaurwa mumapepa akasvitswa kudare nehurumende ayo anoti mafuta aya akatengwa kukambani yeNooa Petroleum.
Mushure memutongo waVaBhunu uyu, gweta raVaMangoma, Amai Beatrice Mtetwa vaudza dare kuti zvanga zvisina kufanira kuti pabuditswe rimwe gwaro remakambani aya sezvo gwaro iri rakanga risipo pamapepa ekupomera VaMangoma mhosva kana kuti maindictment papers.
Zvichakadai, mumutongo wavo, VaBhunu vati magweta aVaMangoma anofanira kugadzirisa mhinduro yavo kana kuti defense outline, kuti ienderane negwaro idzva rasvitswa kudare.
Nekudaro, Amai Mtetwa vati vanoda nguva yekuti vanyore mhinduro itsva pamwe nekuwongorora kuti gwaro iri riri pamutemo here kana kuti kwete.
Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mudare nemusi weChina.